uvalo Archives - Countdown to the Kingdom
Tag Archives: ukwesaba
Uthando Lwethu Lokuqala
Ulahlekelwe uthando owawunalo ekuqaleni.
Ukholo, Hhayi Ukwesaba
Kuma-refuge, ekudleni, esiXwayisweni, nokuthi wenzeni ngakho.
UGisella - Ukuphela Kwendlela
Ungesabi uthando lukaNkulunkulu.
Okwenza Singakwazi Ukuthatha “I-Chip”
Luz de Maria ku-microchip…
Yini inhloso enkulu yale webhusayithi, yeziprofetho, yengxoxo "yezikhathi zokuphela", njll.
UGisella Cardia - Awukakulungeli Okwamanje
Musa ukuchitha isikhathi esithe xaxa.
USimona - Nikeza Konke KuJesu
Ngeke wephuze ukukududuza nokukuhlanganisa.